वास्तवमा नेपाली जनता अचम्मका छन् । ...अदभूत छन् भन्दा पनि हुन्छ, नेपाली जनता । सोझासाझा र वीर त छँदै थिए, अब पछिलाले समयमा आएर खासगरी २०४६ सालपछि प्रत्येक नेपालीहरुलाई नै बिर्सने रोगले गाँजेको छ । झन् ०६२/६३ सालको कथित जनआन्दोलन पछि त नेपालीहरुमा यो रोग उच्च रुपमा देखा परेको छ । खासगरी आफ्ना पक्षका नेताहरुले के बोलेका थिए ? के गर्छु भनेका थ्एि ? मुलुकलाई कसरी, कतारित डोर्‍याउँछु भनेका थिए ? ती सबै बाचाबन्धन भुसुक्कै बिर्सिए– नेपाली जनताले । अरु विकसित प्रजातान्त्रिक
(लोकतान्त्रिक) मुलुकमा नेताले गल्ती गर्‍यो भने राजनीतिक दलहरुले बाटो बिराए भने जनताले दण्ड दिन्छन्, चुनावको माध्यमबाट । तर, हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो सिस्टम त छँदैछैन । जति राष्ट्रघात गर, जति भ्रष्टाचार गर, जतिसुकै अन्याय अत्याचार, दूराचार गरे पनि केही फरक पर्दैन, नेता र राजनीतिक दलहरुलाई । जनता चुनावमा तिनै नेता र राजनीतिक दलहरुलाई जिताउँछन् । अच्चमै छ ।
एकथरि भन्छन्, अर्को विकल्प नभएर हो । अर्काथरि भन्छन्– लोभ, लालच र आश्वासनको भर बढी परेर हो । अझ अर्काथरि त, चुनावमा भोट हाल्न मात्र पाए पनि खुसी हुने जनता पनि देखिए । अब यस्तो अवस्थामा जनता सार्वभौम छन्, जनता नै जनार्दन छन् भन्ने पुष्टी हुन गाह्रो हुन्छ । फेरि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उक्तिलाई आत्मसात गरेका नेपाली जनताले अरु दायाँ बायाँ सोच्दै सोच्दैनन् । आउँदै गरेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर कसैले सर्वेक्षण भनेर एउटा डाटा प्रस्तुत गर्‍यो, जसमा कांग्रेस पहिलो नम्बरमा । एमाले दोस्रो नम्बरमा तेस्रोमा माओवादी केन्द्र रहेको देखाइयो । भन्नुपर्दैन यो कांग्रेसी सर्वेक्षण थियो । उता एमाले समर्थित एनजिओको सर्वेक्षणमा एमालेले स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा बढी स्थानमा जीत हासिल गर्ने भनेर देखाइएको छ । झन् करिब तीन सय स्थानका विभिन्न पदहरुमा एमालेले निर्विरोध निर्वाचित भएपनि त एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरु त्यसैलाई भजाउन लागि परेका छन् ।
उता माओवादी केन्द्र चै लोडसेडिङलाई मुख्य हतियार बनाउन खोज्दैछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, अझ उर्जमन्त्री जनार्दन शर्मा र कूलमान घिसिङले गर्दा नै हो लोडसेडिङ हटेको भन्ने प्रभाव पार्न माओवादी केन्दका कार्यकर्ताहरु दिनरात खटेको देखिन्छ । अझ प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार हट्ने वित्तिकै पुन:लोडसेडिङ सुरु हुन्छ, वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधान आफ्नो देन भएकाले अब आर्थिक विकास पनि आफ्नो हुनुपर्छ भनेर दाबी गर्दैछ ।
राप्रपा पुरातन संस्कृतिको जगेर्ना, हिन्दु राज्यको पुन:स्थापनालाई मुख्य हतियार बनाउँदैछ । अब अरु भुरेभारेहरुको के को चर्चा गर्ने ? रेलदेखि लिएर सुलभ तेलसम्मले चर्चा लिएको छ– स्थानीय तह चुनावमा । अब स्थानीय जरुरतहरुलाई लिएर गरिएका स्थानीय तवरका बाचाबन्धनहरु त कति हो कति ? त, भन्नुको तात्पर्य आजसम्मको रेकर्ड हेर्दा पनि बोलेका, भनेका कुराहरु केही पनि, कसैबाट पुरा भएका छैनन् । तै पनि हामी नेपालीहरु बडो उत्साहका साथ वैशाख ३१ गतेको चुनावमा होमिएका छौं । गल्ली, चोक, मुख्य सडक सबैतिर उत्साह देखिन्छ । सब्रै नेपालीहरु अहिले कार्यकर्ता भएका छन् । हिजो गरेका वाचाहरु किन पूरा भएनन् भनेर पुराना फेहरिस्त निकाल्ने जमर्को नेपाली जनताले कहिल्यै गर्दैनन् । त्यसैकारण पनि नेता र राजनीतिक दलहरुले पटक पटक मजा लुट्ने मौका पाइरहेका छन् । २० वर्ष अघि स्थानीय चुनावमा भएका बखत त्यतिबेलाका विजयी राजनीतिक दलहरुले (आफ्नो गाउँ, वडा, नगरमा) के के गर्छु भनेका थिए ? त्यतिमात्र सम्झिए पनि नेताहरु जिम्मेवार हुन्थे कि? तर, के गर्ने ? भोट मात्र हाल्न पाए पुग्छ, हामी नेपालीहरुलाई । खैर, २० वर्षपछि स्थानीय नेता छान्ने मौका पाएकोमा सबैलाई शुभकामना छ है । अझ असफल भइसकेको गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गराउन, संस्था गनाए पनि हुन गइरहेको यो चुनावलाई उत्साहपूर्वक सफल बनाउने कि ? मतदान केन्द्रमा जाने नजाने निधो जनताले नै गरुन् । त्यो जिम्मेवारी पनि नेपाली जनतालाई नै । बुझौं, यो व्यवस्थाबाट नेपाल र नेपालीलाई केही फाइदा हुनेवाला छैन । किनकि यहाँ राजनीति कम अपराध ज्यादा भइरहेछ ।